China Single Grouping Robot Brick Stacking System emepụta na suppliers | Onye na-eme brik
Akụkọ banyere BricMaker
Profaịlụ nke BricMaker
Agụụ Extruder Series
Tingcha-Grouping-inggbọ njem System
Sistemụ Robot Stacking
Ndinuak Machinery Series
Gwakọta Machinery Series
Nri Machinery Series
Ọwara Tunn kiln
Ugboro abụọ nkuku Robot brik Stac ...
Ugboro abụọ nkuku Robot brik stacking System ...
Gburugburu Stone mwepụ ala
Gburugburu nkume mwepụ igwe bụ a raw materi ...
Box feeder bụ otu ụdị nke inyeaka conveyin ...
Ugboro abụọ aro inggwakọta Extruder
Ngwakọta igwekota a bụ 132 / 185KW, nke nwere ...
JKY75 / 65EIII IV-4.0 Vacuum Extruder
Ihe nlere nke a bu ihe kachasi nma ...
JKY80 / 70-4.0 Agụụ Extruder
Otu mkpokọta Robot brik Stacking System
Mmehieghaa nchịkọta Robot Brick Stacking System na ikike ibu nke 500KG, 700KG, 800KG. Njikwa akụkụ ejiri usoro ihe eji arụ ọrụ na nke a na-etinye na robot base, nke mere na kpochapụrụ njikọ USB na ọnọdụ dị mfe. Mkpụrụ aka na-arụ ọrụ na oghere dị omimi, si otú a na-ezere nkwojiaka aka nke igwe robot merụrụ. A na-eji robot nwere ọtụtụ atụmatụ ọgụgụ isi na njikwa arụmọrụ kachasị elu R-J3ic.
Ihe Nkọwa nkọwa
Akara Onye na-eme BricMaker, YASKAWA, KAWASAKI
Ọrụ Brick / mgbochi stacking na ụgbọ njem
Workingkpụrụ ọrụ PLC Control akpaaka
Akwụkwọ ikike Afọ 1
Afọ ndụ Afọ 10-15
Mgbe Ọrụ gachara Ogologo Ndụ Ndụ
25-39 + 16.7
25-39 + 22
25-39 + 20.7
Anyị malitere R & D auto-ịcha-grouping-ụgbọ njem usoro kemgbe 2008, dịrị n'otu na-arụkọ ọrụ na ọtụtụ n'elu ọkachamara na injinia na ụlọ ọrụ a. Na nzaghachi nke mba anyị, "ngbanwe ntuziaka nke akwụkwọ ntuziaka, nrụpụta ọrụ na nkọwapụta ihe ọmụma", anyị kwalitere amụma nke mgbidi mgbidi ihe mgbanwe na nkwalite, mere nnukwu ego maka brik na-eme ngwa R & D na afọ 10 gara aga, ma nakweere teknụzụ mmepụta teknụzụ na nhazi ngwa ọrụ, site na ọkọ iji nwee ogo, mepụtara nke ọma Robot Stacking Integrated Systems.
Na 2016, anyị banyere ahịa Vietnam, na-enwe ekele maka mmepe ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ brik Vietnam, ruo taa anyị nyere ihe karịrị narị robot abụọ na Vietnam. Inye àgwà mgbe ọrụ, anyị melite a ọkachamara mgbe ọrụ otu na Chinese na Vietnamese ẹkesikpede. Na nzaghachi na awa 24, gbakwunye ọkachamara ọkachamara, ọnụ ahịa akụ na ụba, anyị na-arụ ọrụ nweta aha ọma.
N'ọdịnihu dị nso, enwere olile anya na anyị nwere ike ịtọlite ​​ọtụtụ mgbe ndị otu ahịa ma ọ bụ ụlọ ọrụ alaka ụlọ ọrụ na mba ofesi, na-enyekwu brik na ụlọ ọrụ tile na-arụ ọrụ robot na-eme ka ihe mgbochi, imeziwanye akpaaka.
Nke gara aga: Ahịhịa Crusher
Osote: Ugboro abụọ nkuku Robot brik stacking System
Ugboro abụọ nkuku Robot brik stacking System
BricMaker Ngwaahịa kacha ọhụrụ
BricMaker Ngwọta Osisi Brick Auto
Anyị BricMaker ọkachamara maka ụrọ (sintered) brik akụrụngwa n'ichepụta, R&D, n'ekwú ọkụ na akpaaka brik osisi ngwọta. Anyị BricMaker na-enye gị akụrụngwa dị elu dị elu na ngwọta teknụzụ, iji nyere gị aka inweta uru akụ na ụba ka ukwuu ma ghọta uru ndụ gị bara!
Ọrụ nke BricMaker